शाओमी मी ब्यान्ड C सी स्पेनमा केवल २० यूरोको लागि आउँछ Androidsis
अब तपाईं स्पेनमा सियोमी एमआई ब्यान्ड C सी किन्न सक्नुहुनेछ २० युरो भन्दा कममा!
दुई महिना बितिसक्यो पनि शाओमी मी बैन्ड of को प्रस्तुतीकरण, र निर्माताले हामीलाई भर्खरै अर्को महान समाचार दिए। र, तपाईं पहिले नै स्पेन मा एमआई बैंड4सी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो? जुन विध्वंसको मूल्यमा छ।
मुख्यतया किनभने तपाईं सस्तो शाओमी स्मार्टब्यान्ड १। .19,99eमात्रमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो रोचक पहनने योग्य द्वारा प्रस्तुत गरिएका सुविधाहरूको विचारमा एउटा स्क्यान्डल फिगर।
यो सियाओमी मी ब्यान्ड C सी हो
भन्नुहोस्, केहि हप्ता पहिले यो सत्य हो शाओमी मी बैन्ड C सी आधिकारिक घोषणा गरीएको थियो, अब जब यो पहिरिनयोग्य हाम्रो देशमा आइपुगेको छ। र, तपाईं तल तल लिंकमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईं मात्र 19,99 यूरो को लागि यो पूर्ण गतिविधि को कंग्रेस किन्न सक्नुहुन्छ। एक सम्झौता!
Xiaomi Mi Band 4C बिक्रीमा खरीद गर्नुहोस्
तिनीहरूको हतियार फरक पार्ने हो? A 1.1 इन्च LCD स्क्रीन र यसले २२० x १ p० पिक्सेलको रिजोलुसन प्रस्ताव गर्दछ, २०० निटको चमकको थपमा ताकि तपाई कुनै पनि सामग्री देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं एकदमै घमाइलो ठाउँमा हुनुहुन्छ वा छैन।
अर्कोतर्फ, यो पहिरन योग्य पानी प्रतिरोधक छ, atmosp वायुमंडलमा डुबाउन सक्षम भएको। यसको डिजाइनको सबै भन्दा राम्रो? कि स्याओमी मी ब्यान्ड C सी सँग चार्जिंग स्टेशन छैन, किनकि यो सीधा एक मार्फत चार्ज गरियो लुकाइएको यूएसबी पोर्ट पट्टाको एक छेउमा।
थप रूपमा, यस गतिविधि ट्र्याकरले पाँच विभिन्न खेलहरू रेकर्ड गर्न सक्षम छ: सडक र ट्रेडमिल दौड, नि: शुल्क प्रशिक्षण, साइकल र पैदल। र, यो अन्यथा कसरी हुन सक्छ, यो मुटुको दर सेन्सर र निद्रा निगरानीको साथ आउँदछ त्यसैले तपाईं आफ्नो बाँकीको अन्तिम अन्तिम विवरण नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
केकमा आईसिंग एक स्वायत्तता द्वारा दिइएको छ जुन आशामा रहन्छ। मुख्य कारण यो समस्या बिना स्वायत्तताको दुई हप्ता सम्म पुग्छ। र हेर्दै हुनुहुन्छ कि अब तपाईं सक्नुहुन्छ शाओमी मी ब्यान्ड C सी मात्र १। .4eयूरो मा किन्नुहोस्, यो ती सम्झौताको एक हो जुन तपाईंले मिस गर्नु हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » अन्य उपकरणहरू » अब तपाईं स्पेनमा सियोमी एमआई ब्यान्ड C सी किन्न सक्नुहुनेछ २० युरो भन्दा कममा!
Samsung अगस्तमा सामसु Samsungले हामीलाई के प्रस्तुत गर्नेछ?
कुनै पनि वेबसाइटलाई Android मा पूर्ण स्क्रीन नेटिभ वेब अनुप्रयोगमा रूपान्तरण गर्ने तरिका